कस्तो होला गायिका समीक्षाको ‘महाकाली’ रुप ? – Pahilo Page
कस्तो होला गायिका समीक्षाको ‘महाकाली’ रुप ?
१० माघ २०७८, सोमबार ०७:५८ 88 पटक हेरिएको
काठमाडौं । पछिल्लो समय फेरि पनि अभिनेता पल शाह र गायिका समीक्षा अधिकारीबीचको विवादले सञ्चारमाध्यमहरु मात्रै नभई नेपाली चलचित्र क्षेत्र नै तातेको छ ।
२१ अक्टोबर २०२१ मा सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा एक स्टाटस लेख्दै गायिका अधिकारीले अभिनेता शाहसँगको आफ्नो सम्बन्धको वास्तविक यथार्थ बाहिर ल्याउने बताएसँगै चलिचित्र क्षेत्रमा फेरि हंगामा मच्चिएको हो ।
उनले सामाजिक संजालमा एक स्टाटस पोष्ट गर्दै यस अगाडिका आफ्ना अभिव्यक्ति वास्तविकताभन्दा बाहिर रहेको र कसैको अनुरोधमा लेखिएको बताएकी छन् ।
२४ अक्टोबर २०२१ मा लेखिएको स्टाटससहित एक पोष्ट गर्दै भनेकी छन् ‘म लामो केही भन्दिन । २४ अक्टोबर २०२१ मा मेरो फेसबुकमा लेखिएको यो स्टाटस वास्तविकता भन्दा धेरै टाढा छ । जुन कसैको अनुनयमा लेखेको थिएँ । अब समय आउँदैछ, यथार्थ खुलाउँदैछु ।’
गत २४ अक्टोबरमा उनले पल र आफूबीच अभिभावकको सम्बन्ध भएको बताउँदै मिडियामा आएको अन्तरंग सम्बन्धको समाचारले चरित्र हत्या भएको बताएकी थिइन् ।
तर, अहिले उनले उक्त स्टाटस कसैको अनुनयमा लेखेको भन्दै यथार्थ बाहिर ल्याउने बताएपछि फिल्मीक्षेत्र तरंगित बनेको छ ।
त्यसअघि पनि अधिकारीले पटक–पटक स्टाटस लेख्दै आफूलाई कमजोर नसम्झन चेतावनी दिइरहेकी थिइन । उनले १९ अक्टोबरमा ‘परेको खण्डमा महाकालीको रुप लिन सक्ने’ भन्दै चेतावनी शैलीमा स्टाटस लेखेकी थिइन् ।
उनले भनेकी थिइन–‘यदि कसैले नारिलाइ कमजोर सोचेर उसको विश्वास र भावनामाथि खेल्यो भने उसले नारिको शक्तिको सामना गर्न सक्दैन । त्यसैले नारिलार्इ कमजोर नसोच्दा पनि हुन्छ । नारिले दुर्गाको रुपमा माया ममता दिन सक्छिन् भने परेको खण्डमा महाकाली जस्तो रूप लिएर सर्वनास पनि गर्न सक्छिन् ।’
सोहि दिनको केही समयपछि फेरि अर्को स्टाटस लेख्दै अधिकारीले अप्रत्यक्ष रुपमा पललाई इंगित गर्दै शेर लेखेकी छन् ।
यस्तो छ अधिकारीले लेखेको स्टाटस
सायद तिमिलाई नसम्झेको पल हुँदैनन्
रियल लाग्ने सबै अनुहार रियल हुँदैनन्।।
(विस्तारै खुल्छ मुकुन्डो)
पल र समीक्षा विगत लामो समयदेखि एकअर्कासँग नजिकिएका थिए। यो निकटताले गम्भीर मोड लिएका कारण नै उनीहरू दुवै अहिले मिडियासँग तर्किरहेका छन्। ‘सुर्ती माड्दै’ बोलको गीतको सुटिङका क्रममा निकट भएका उनीहरुको सम्बन्धले नयाँ मोड लिएको छ।
पलले समीक्षासँगको प्रेमलाई गम्भीररुपमा नलिँदा समस्या उत्पन्न भएको बताइएको छ। तर, भर्खरै करियरको उचाइ छुँदै गरेकी समीक्षा भने पलको प्रेममा चुर्लम्मै डुबिन्। प्रेममा रहेको केही समयमा नै पलले समीक्षालाइै वेवास्ता गर्न लागेपछि दुईबीचको तनाव बढेको हो।
पलले समीक्षालाई छोड्न खोजेपछि समीक्षा रिसाएकी हुन्। उनीहरुले एकअर्कालाई धम्कीसमेत दिएको हल्ला चलेको छ। समीक्षाले पललाई यदि आफूसँगको प्रेम सम्बन्ध स्वीकार नगरे आफूसँग रहेका फोटो÷भिडियोहरू बाहिर ल्याइदिने र पुलिस केससमेत गर्ने भनी धम्की दिएको यस अघिनै समाचार आएका थिए ।
अहिले अधिकारीले नै वास्तविकता बाहिर ल्याउने जनाएपछि उनीहरु दुईबीच कुनै अन्तरंग सम्बन्ध रहेको आँकलन गर्न सकिन्नछ । यसअघि विवाद हुँदा समीक्षाको आफन्तको रोहबरमा उनीहरूबीच विवाहको मौखिक समझदारी भएको समाचार आएको थियो । र, समिक्षाले पलसँगको सम्बन्ध अभिभावकको जस्तो भएको भन्दै स्टाटस लेखेकी थिइन् ।
तर, समिक्षाले अहिले कसैको आग्रहमा उक्त स्टाटस लेखेको भन्दै सबै बास्ताविकता बाहिर ल्याउने बताएपछि पल तनावमा परेका छन् । अमेरिका जाने तयारीमा रहेका पललाई समिक्षाले नै रोकेको पनि बुझिएको छ ।